Xasan Shiikh:”Annaga iyo Ajnabiga wada-hadal nagama dhaxeeyo”
Home Somali News Somali Government Xasan Shiikh:”Annaga iyo Ajnabiga wada-hadal nagama dhaxeeyo”
Madaxweyne Xasan Shiikh oo wareeysi dheer dhinacyo badana taabanaya siiyay idaacada BBC-da qaybta Afka Soomaaliga, ayaa waxa uu kahadlay arimo farabadan oo ay kamid yihiin amniga, wadahadalada Somalia iyo Somaliland, iyo dhaqaalaha.
“Al-shabaab waxa kujiraa waa sadex qaybood ayay isugu jiraa, laba qaybood waa Soomaali midna waa Ajnabi, dadka ajnabiga ah ee Al-qaacidada ahna waxa naga dhaxeeya majiraan, waxaa naga dhaxeeyo ineey dalka nooga tagaan, wiilasha iyo gabdhaha katirsan shabaab waa wiilasheena waa gabdhaheena waana soo dhoweyneyna haday kasoo laabtaan falkaas” ayuu yiri madaxweyne Xasan Shiikh.
Wadahadalada Somaliya iyo Somaliland:
“Annaga ilaa iyo hadda kaalmo calami ah oo kaash ah oo caalamka nooga timid majirto, daqliga caadiga ah ee soo galayay doowlada intiisa badana Dekada iyo Garoonka Muqdisho kayimaado oo aan hada dib uhabayn kuwadno ayaan ku shaqeeynaa” ayuu yiri madaxweynaha.
Sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in doowlada ay akashato ganacsatada magaalada Muqdisho iyo qurbo joogta Soomaaliyeed ee dibada kunool oo lacago iska soo aruuriya taasoo Bankiga dhex lagu soo shubo.
Madaxweyne Xasan Siihk ayaa markii xilkaan loo dhaariyay waxa uu ballan qaaday inuu waxbadan ka qaban doono arimaha Ammaanka, dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaana hadda doowladiisa ay ku howlantahay sidii ay isbadal muuqdo ugu samayn lahayd amniga goobaha ay doowlada hada maamusho.